क्यासिनोको स्वामित्वका लागि राजबहादुरको रोइलो – YesKathmandu.com
क्यासिनोको स्वामित्वका लागि राजबहादुरको रोइलो
बुधबार १६, असार २०७२
काठमाडौं । ‘कहिले सासूको पालो, कहिले बुहारीको पालो’ त्यसै भनिएको होइन रहेछ । ‘राजाको ज्वाइँ’ भएर एक समय चकचकी चलाएका उनै राजबहादुर सिंह हुन्, हिजोआज निकटस्थ सुरक्षा अधिकारीकहाँ धाइरहेका छन्, कसैले थर्काएको मौखिक उजुरी बोकेर ।
यसरी राजबहादुरले रोइलो मच्चाएको मामिला रहेछ, क्यासिनोको । होटल याक एण्ड यतिमा सञ्चालित रोयल क्यासिनोको स्वामित्व दावी गर्ने दुई भाइमध्ये एकले आफूलाई दाउदको मान्छे र अर्कोले ‘काठमाडौं हल्लाउने मान्छे हुँ’ भन्दै धम्की दिएको दुखेसो प्रहरीहरुसँग पोखेका हुन् । क्यासिनो रोयल उनका भाइ हरिशको स्वामित्वमा रहेको गिल्ट इन्टरनेशनलले सञ्चालन गर्र्दै आएको थियो । त्यसमा पार्टनर थिए, मनोज सुवेदी । उनले आफ्नो स्वामित्व रहेको बेला अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गराई क्यासिनो सञ्चालन गरे । तर, राजबहादुरहरुसँगको साझेदारीबाट अलग भएपछि उनकै निवेदनका आधारमा अदालतले पहिलाको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो, अर्थात् बन्द छ । मनोज राजबहादुरको साझेदार हुँदै गुजराती नागरिक आशिष पटेल र पहिला क्यासिनोहरुमै काम गर्ने नेपाली धीरेन्द्रविक्रम मोक्तानहरुले मासिक ३० लाख भाडा तिर्ने गरी साढे तीन करोडमा उक्त क्यासिनो सञ्चालनको सम्झौता गरेका थिए । अहिले मनोज त्यहाँबाट अलग भएर उपत्यकाबाहिर मिनी क्यासिनो चलाउनमा व्यस्त छन् । यता, राजबहादुर आपतमा परेका छन्, गुजरातका पटेल र काठमाडौंमै बस्ने मोक्तानबाट । राजबहादुरले प्रहरीसमक्ष ‘धम्की दियो’ भन्दै हिँडे पनि प्रमाण लाग्ने कुनै कुरा उपलब्ध नगराइदिँदा उनले भन्नु र प्रहरीले सुन्नुमै सीमित छ । पटेल र मोक्तानहरुले राजबहादुरको गिल्ट इन्टरनेसनलको पूरै स्वामित्व माग गरेका हुन् ।
उता, सरकारले जारी गरेको क्यासिनो नियमावली २०७० को पालना गराउनुपर्नेमा पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पा ‘स्वदेशी नागरिकको त्यत्रो लगानी फस्न दिनु हुँदैन’ भन्दै छन् । काठमाडौंका क्यासिनोमा प्रहरी, उद्योग, पर्यटन, श्रमजस्ता निकाय मात्र नभई ट्रेड युनियनका लफडा चर्किएपछि क्यासिनोका ‘डन’ भनिनेहरु भारतीय सीमावर्ती शहरमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, त्यसरी सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि क्यासिनोले ऐनको पालना गरेका छैनन् । केही दिनअघि यही कुरा लिएर केही उच्चपदस्थ कर्मचारी मन्त्रीकहाँ पुगे । सब क्यासिनो बन्द गराउलान् भन्ठानेका ती हाकिमहरु त्यतिबेला हिस्स परे, जब मन्त्रीले क्यासिनोकै बचाव गर्दै जवाफ दिए । ऐनअनुसार, नेपाली भूमिमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाभन्दा कम्तिमा पाँच किलोमीटरको दूरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरमा झण्डै एक दर्जन क्यासिनो ऐनविपरित सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता मिनी क्यासिनो सञ्चालनका निम्ति कम्तिमा चार तारे होटल हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, पोखराबाहेक तराईका कुनै पनि जिल्लामा दुई तारेभन्दा ठूला होटल छैनन् । भएकैहरु पनि समस्यामा छन् । सरकारले २५ करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने ऐन बनाएपछि होटल सोल्टीमा क्यासिनो चलाइरहेका सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङका छोरा विजयहरुको कम्पनी माजोङ इन्टरनेशनल पनि समस्यामा परेको छ । चुक्ता पुँजीसँगै वार्षिक दुई करोड रोयल्टी तिर्नुपर्ने र चुक्ता पुँजी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पनि हुनुपर्ने क्यासिनो नियमावलीमा उल्लेख छ । माजोङले भारतीय लगानीकर्तामार्फत त्यो रकम पुर्ताल गर्ने तयारी गरेको, तर विदेशी लगानी ल्याउने विद्यमान प्रक्रियाहरु पूरा गर्दा कम्पनी डुब्ने खतरा भएको भन्दै अहिले उद्योग र पर्यटनतिर माजोङ पक्षका दलालहरु सल्बलाएका छन् । यस्तै समस्यामा परेको छ, क्यासिनो सांग्रीला । मलेसियाको सिल्भर हेरिटेज नामक कम्पनीको लगानीमा लोकल एजेन्टका रुपमा ठमेलको टाइगर टप्स माउन्टेनका साहु राजेन्द्र बजगाइँहरुले उक्त क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुले ह्याप्पी वल्र्ड नामक फर्मका नाममा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, ऐनले तोकेको चुक्ता पुँजीको प्रावधान पूरा हुन नसक्दा शक्तिकेन्द्रहरुमा ‘दलाल’ खटाइसकेको बुझिएको छ ।
यदि सरकारले क्यासिनो ऐन २०७० लाई कडाइँ गर्ने हो भने संविधानसभाका सदस्य नरेन्द्र शाहले महेन्द्रनगरको होटल ओपेरामा चलाएको क्यासिनोदेखि धनगढीको साफी होटलमा किशोर सिलवालको रक इन्टरनेशनलका क्यासिनोहरु पनि बन्द हुने स्थितिमा छ । महेन्द्रनगर र धनगढीले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको पाँच किलोमिटर दूरीको प्रावधान त पूरा गर्लान्, तर निर्धारित चुक्ता पुँजी पूरा गर्नु पहाड बोक्नुझैँ मुस्किलको विषय बनेको छ ।
नेपालगञ्जको होटल स्नेहा, भैरहवाको होटल लाकौल र न्यान्सीहरु त भारतीय सिमानाको तीन किलोमिटर भित्र छन् । भैरहवाको होटल न्यान्सीमा किशोर सिलवालको लाइसेन्समा मलेसियाको रक इन्टरनेशनलले लगानी गरेर क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ । होटल मालिक पूर्वमन्त्री दीपक बोहोरासहित सीपी श्रेष्ठ, कृष्णप्रताप मल्लहरु हुन् । कृष्णप्रताप पूर्वमन्त्री शरद्सिंह भण्डारीका पहिला फुपाजू र अहिले बहिनी ज्वाइँ हुन् । उनी शेरे धनुषाका नामले चिनिने स्व. हेमबहादुर मल्लका भतिजा पनि हुन् । शरद्सिंहकी फुपूसँग विवाह गरेका थिए, तर फुपूको निधन भएपछि शरद्सिंहले फुपाजूलाई बहिनी दिएका छन् । अर्थात्, उतिबेला उनै शरद्सिंह पर्यटन मन्त्री भएको मौका छोपी कृष्णप्रतापहरुले भैरहवामा खडा गरेको ‘क्यासिनो बिरासत’ ढाल्ने कुरामा अहिलेका मन्त्री कृपासुर पनि इच्छुक देखिएका छन् । उक्त होटलमा पहिला ह्याप्पी आवर नामक कम्पनीले क्यासिनो चलायो । २४ प्रतिशत लाइसेन्सको रोयल्टी तिर्ने र बाँकी ७६ प्रतिशत शेयर सीपी श्रेष्ठ, मनोज सुवेदी, रक्सीका व्यापारी सेठ्ठी र हेमन्त कोलाक्षपतिले लिए । पछि ह्याप्पी आवर न्यान्स होटलबाट फिर्ता भयो । अहिले किशोर सिलवालहरुको रक इन्टरनेशनले त्यहाँ क्यासिनो चलाउँदैछ ।
उता, महेन्द्रनगरको होटेल ओपेरामा सेन्टर मेडिया गेमिङ क्लबका नाममा क्यासिनो चलाउनेहरु टाउकोमा हात राख्न थालेका छन् । उनीहरुले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा हिसिला यमीमार्फत लाइसेन्स लिएका हुन् । त्यहीँको एकतारे होटल स्वीट ड्रिममा किशोर सिलवालको क्यासिनो सञ्चालनमा छ । यस्तो समस्यामा वीरगञ्जको होटल सुरज, भिस्वाहरु पनि पर्दैछन् ।जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
किन यसरी प्रचण्डलाई पिरोले राष्ट्रपतिले ?
मदन भण्डारीलाई फेरि मार्ने कामरेड ?
भारतबाट नेपालमा फोन सम्पर्क गर्दा लाग्ने शुल्क आधा घट्यो
ट्रम्पको उदय नेपाललाई घाटा
श्रीमतीजीको बेरुजु १० करोड ! मिनाह पाउँ हजुर
सरकारले २ लाख भूकम्पपीडितहरुलाई अनुदान उपलब्ध गरायो
मन्त्री लालबाबुको रिसमा अर्थमन्त्रीले हाने कर्मचारीलाई लात
माओवादी मन्त्रीमा सल्यान भर्सेज कर्णांली बिवाद, जनार्दन र शक्तिबीच टकराव
भरतपुर प्रकरणमा आजको वहस सकियो,आजै निर्णय आउने सम्भावना
सामान्य प्रशासनमन्त्रीबिरुद्ध कमल थापाको प्रधानमन्त्रीलाई मौखिक उजुरी
सुडान काण्डका भ्रष्टाचारी दुई पूर्वआइजीपीसहित चार जनालाई जेल चलान